Wafti uu hogaaminayo M/weyne ku xigeenka Puntland Gen. C/samad Cali Shire oo Garowe ku soo laabtay. – Radio Daljir
Janaayo 5, 2011 12:00 b 0
Garowe, Dec 05 – Wafti uu hogaaminayo M/weyne ku xigeenka Puntland Gen. C/samed Cali Shire ayaa galabta dib ugu soo laabtay magaaladda Garoowe ee caasimadda dawlada Puntland. Gen. Shire ayaa in dhawaale hawlo shaqo u jogay magaalada Bossaso ee gobolka Bari.
M/weyne ku xigeenka oo socdaalkan maanta ay ku weheliyeen taliyaha ciidanka daraawiishta Gen. Siciid Maxamed Xirsi ‘Siciid Dheere’ iyo wasiirka arimaha gudaha Gen. C/llaahi Axmed Jaamac ‘Ilkajir’ ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey Garowe.
M/weyne ku xigeenka ayaa mudo ku dhow 6 bilood waxaa uu ku sugnaa gobolka Bari, wuxuuna halkaasi kasoo qaybtay hawlo badan, kuwaaasi oo ay ka mid yihiin soo afjaridda dagaalkii Galgala, daminta colaad beeleed mudo ka aloosnayd deegaanka Igdhjays, Bari, dhamaystirka heshiis laba beelood loogu qabtay Carmo, sugida amaanka magaaladda Bossaso iyo waxyaabo kale oo tirabadan.
Gen. Shire ayaa markii uu dib ugu soo laabtay Garowe waxaa soo dhoweyntiisa ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshadda ku sugan Garowe, kuwaasi oo kaga hortegey meel ka durugsan magaaladda, waxaana M/weyne ku xigeenka loo soo gelbiyey dhinaca aqalka madaxtooyadda, halkaasi oo uu ku negaan doono.
Imaanshiyaha M/weyne ku xigeenka Puntland Gen. C/samed Cali Shire ayaa ku soo beegmaysa xili mudooyinkii danbe hawlo kor loogu qaadayo sumcadda iyo sugitaanka amaanka Puntland ay ka socdeen deegaanadda Puntland, gaar ahaana gobolka Bari oo uu si gaar ah ugu xilsaarnaa M/weyne ku xigeenku, waxaana xusid mudan in waxyaabo badan ay ka qabsoomeen arimihii M/weyne ku xigeenku u tegey gobolka Bari.
Si kastaba ha ahaatee, M/weyne ku xigeenka ayaa lagu wadaa saacada soo socda inuu warbaahinta uga xog waramo safarka uu kaga yimid gobolka Bari, iyo waxyaaabaha u qabsoomay intii uu ku sugnaa gobolka.
Idaacada Daljir Buuhoodle.
Guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad oo ka badbaaday qarax, iyo bileyska oo falkaasi u qabtay labo nin.